न्युरोन्टिन साइड इफेक्टहरू र तिनीहरूलाई कसरी हटाउने एकलकेयर - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
भारी खेल समुदाय स्वास्थ्य प्रेस चेकआउट औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी, समाचार कम्पनी, चेकआउट औषधि जानकारी कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समाचार मनोरञ्जन समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण
मुख्य >> औषधि जानकारी >> न्युरोन्टिन साइड इफेक्टहरू र तिनीहरूलाई कसरी हटाउने
ड्रग जानकारी न्युरोन्टिन साइड इफेक्टहरू कसरी हटाउने जान्नुहोस् जस्तै निन्द्रा, चक्कर, र थकान
न्युरोन्टिन साइड इफेक्टहरू | साइड इफेक्टहरू कति लामो हुन्छ? | चेतावनी | अन्तर्क्रिया | कसरी साइड इफेक्टबाट बच्ने
न्युरोन्टीन जेनेरिक ड्रग ग्याबापेंटिनको लागि एक ब्रान्ड नाम प्रिस्क्रिप्सन औषधि हो। वयस्कहरू र साथ बच्चाहरूमा दौरा रोकथाम गर्न र नियन्त्रण गर्न यो FDA अनुमोदित छ मिर्गी र पोस्टहेर्टेटिक न्यूरल्जियाको उपचार गर्न जुन नर्भ दुखाइ द्वारा हुन्छ दाद (हर्पेस zoster)। यो कहिलेकाँही अन्य प्रकारका न्यूरोपेथीको उपचारको लागि पनि सिफारिस गरिएको छ, फाइब्रोमाइल्जिया, र रक्सी फिर्ता।
कुनै पनि अन्य औषधी जस्तै, यो साइड इफेक्ट र अन्य लागु औषध प्रभावको बारेमा सचेत हुनु महत्त्वपूर्ण छ। न्युरोन्टिन लिनु अघि तपाईले के जान्नुपर्दछ हेरौं।
सम्बन्धित: न्युरोन्टिन भनेको के हो? | नि: शुल्क न्युरोन्टिन छुट
न्युरोन्टिनको सामान्य साइड इफेक्टहरू
सबै औषधिहरू जस्तै, न्युरोन्टिनले मामूली र अस्थायी साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ। निर्माताका अनुसार सबै भन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू समावेश गर्नुहोस्:
dextroamphetamine-amphetamine एउटै कक्षा मा अन्य औषधिहरु
थकान, तन्द्रा, वा गन्ध (निद्रा)
Nystagmus, वा अनैच्छिक आँखा चालहरू
खुट्टा र खुट्टा मा सूजन
भाइरल संक्रमण (बच्चाहरू)
मतली र बान्ता (बच्चाहरू)
अन्य सम्भावित साइड इफेक्टहरू
थप प्रतिकूल प्रभावहरू समावेश हुन सक्छ:
डबल वा कम दृष्टि
एस्थेनिया, वा कमजोरी
अम्नेशिया वा मेमोरी नोक्सान
न्युरोन्टिनको गम्भीर साइड इफेक्टहरू
न्युरोन्टिनका केही साइड इफेक्टहरू अधिक गम्भीर छन् र चिकित्सा उपचार आवश्यक पर्न सक्छ। यसमा समावेश छन्:
डिप्रेसन, असामान्य मुड वा व्यवहार
आत्मघाती विचार वा आफैलाई चोट पुर्‍याउने विचारहरू
एनाफिलाक्सिस, एक जीवन धम्की एलर्जी प्रतिक्रिया
एन्जियोएडेमा, एलर्जी प्रतिक्रियाबाट छालाको तल सुन्नि
ढिलो, उथलपुथल, वा सास फेर्न गाह्रो
गम्भीर वा असामान्य छालाको दाग
दौरा वा गम्भीर साइड इफेक्टहरू जब औषधि चाँडै रोकिन्छ
न्युरोन्टिन साइड इफेक्ट कहिले सम्म रहन्छ?
केहि साइड इफेक्टहरू, जस्तै चक्कर र निन्द्रा, सम्भव हुने सम्भावना धेरै हुन्छ जब तपाईले पहिले औषधि खान शुरू गर्नुभयो। धेरै साइड इफेक्टहरू अस्थायी हुन् र शरीर र औषधिमा समायोजन हुने बित्तिकै दिनहरू र हप्ताहरूको अवधिमा कम हुनेछ।
न्युरोन्टिन contraindication र चेतावनी
न्युरोन्टिनको शारीरिक लतको लागि कम जोखिम छ, तर यसले केही व्यक्तिहरूमा मनोवैज्ञानिक निर्भरता सिर्जना गर्न सक्दछ। यस अनुसार फाइजर, अधिकांश व्यक्तिहरू जसले न्युरोन्टिनको दुरुपयोग गर्छन् उनीहरूसँग ड्रग्स दुरुपयोगको इतिहास छ त्यसैले विरामीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई कुनै पनि विगतको लागूपदार्थको प्रयोगको बारेमा भन्नु आवश्यक छ। अध्ययन देखाउनुहोस् कि दुरुपयोग को घटनाहरु ले यो लिने जनसंख्याको १% मात्र थियो, र यसको मुख्य कारण मनोरन्जन उद्देश्य वा जानबूझिए आत्म-हानि को लागी थियो।
न्युरोन्टीन (gabapentin) को प्रभाव एक उन्नत मूड वा खुशीयाली देखि शान्त वा विश्राम को लागी हुन सक्छ। यी प्रभावहरू विस्तारित हुन्छ जब अन्य पदार्थहरू जस्तै मदिरा वा ओपिओइडहरू जस्तो कि हेरोइन, फेन्टानेल, र प्रिस्क्रिप्सन पेन्किलरहरूसँग लिन्छन्, र अधिक घातक हुन्छ जब संयोजनमा लिइन्छ। गाबापेन्टिन र रक्सी प्रत्येक केन्द्रीय स्नायु प्रणाली (सीएनएस) डिप्रेशन र श्वासप्रश्वास उदासिनता को कारण। रक्सी र ग्याबापेंटिनको संयोजनले या त दुवै प्रभाव बिगार्न सक्छ। बिरामीहरूले न्युरोनटिन लिँदा रक्सी पिउनु हुँदैन वा मारिजुआना खानु हुँदैन।
बिरामीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा नगरी न्युरोन्टिन लिन बन्द गर्नु हुँदैन, र न्युरोन्टिनको अचानक बन्द गर्न सिफारिस गरिएको छैन। बिस्तारै बिस्तृत खुराक खण्डन गर्दा फिर्ती लक्षणहरूको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ।
न्युरोन्टीनको फिर्ता लक्षणहरूमा चिन्ता, निदाउन वा निदाउनमा कठिनाई, मतली, पीडा, र पसिना समावेश छ। न्युरोन्टीन लिने व्यक्तिहरू जसले यी लक्षणहरूको खस्कँदो अनुभव गर्दछ चिकित्सकको ध्यान खोज्नु पर्छ। A प्लेसबो-नियन्त्रित अध्ययन न्युरोन्टिन र अन्य एन्टी-मिर्गी एपीलेप्टिक औषधिहरूको प्रयोग अचानक बन्द गर्न देखायो भने न्युरोन्टीनको दौडान उपचार नभए पनि जब्ती आवृत्ति बढ्ने सम्भावना हुन्छ।
न्युरोन्टिनको आधा जीवन अपेक्षाकृत छोटो छ, सामान्यतया पाँच र सात घण्टा बीचमा। जबकि सबैले न्युरोन्टिनमा फरक फरक प्रतिक्रिया देखाएमा, धेरै व्यक्तिको लागि, फिर्ताको लक्षणहरू अन्तिम खुराक लिएको १२ घण्टा पछि सुरु हुन्छ। सामान्य फिर्ती लक्षणहरूमा चिन्ता, चिड़चिड़ापन, थकान, टाउको दुख्ने, चक्कर आना, मतली, पेट दुखाइ, र दौर्नु समावेश छ। औषधीलाई धेरै चाँडै रोक्नाले दौडहरू बिगार्न वा बिभिन्न प्रकारको दौरा हुन सक्छ।
Adderall र vyvanse बीच के फरक छ?
सामान्य सिफारिश गरिएको वयस्क दैनिक खुराक न्युरोन्टिन १,8०० मिलीग्राम हो, यद्यपि केही बिरामीहरू प्रति दिन 6,6०० मिलिग्रामसम्म तोकिएका हुन्छन्। सबैजनाले औषधोपचारलाई फरक किसिमले जवाफ दिने भएकोले व्यक्तिविशेषले थोरै रकममा बढी मात्रा लिनु सम्भव छ। बिरामीहरूले न्युरोनटिनको ठूलो डोज उनीहरूको डाक्टर वा फार्मासिष्टले तोक्नु हुँदैन। अत्यधिक मात्राका लक्षणहरूमा डबल भिजन, कम्पन, स्लोरेड स्पीच, सुस्ती, बदलिएको मानसिक स्थिति, चक्कर आउने, सुस्ती, र पखाला समावेश छन्। यस अनुसार फाइजर , घातक श्वसन उदासीनता न्यूरोन्टिनमा प्रयोग गरेका व्यक्तिहरूमा रिपोर्ट गरिएको छ। बिरामीहरूले तुरुन्त नै डाक्टरहरूको सल्लाह लिनुपर्दछ यदि उनीहरूसँग फिक्का वा निलो ओठ, औंलाहरू, वा छाला, गाह्रो वा समस्यामा रहेको सास, वा अनियमित, छिटो, ढिलो, वा उथलपट्टि श्वास, किनभने यी सबै श्वसन उदासीनिका लक्षणहरू हुन्।
बिरामीहरूले उनीहरूको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई भन्नु पर्दछ यदि उनीहरूसँग डिप्रेसन, आत्मघाती विचार, वा लागूपदार्थको दुर्व्यसनको इतिहास छ। न्युरोन्टिनलगायत एन्टी-एपिलेप्टिक ड्रग्स (एईडी) ले कुनै पनि स for्केतको लागि यी औषधी लिने बिरामीहरूमा आत्महत्या विचार वा व्यवहारको जोखिम बढाउन सक्छ। कुनै पनि सED्केतको लागि कुनै पनि एईडी संग उपचार गरिएको बिरामीहरूलाई उदासीनता वा उदासीनता, आत्मघाती विचार वा व्यवहार, र मूड वा व्यवहारमा कुनै असामान्य परिवर्तनको लागि अनुगमन गरिनु पर्छ।
फोक्सोको समस्या वा सास फेर्न सक्ने विकारको इतिहास भएको व्यक्तिहरूले न्युरोन्टिन लिनु अघि उनीहरूको स्वास्थ्य सेवाको सल्लाह लिनु पर्छ। गाबापेन्टिनले जीवनलाई जोखिममा पार्ने सासको समस्याहरू निम्त्याउँछ, विशेष गरी बुढो वयस्कहरू र दीर्घकालीन अवरोधक फुफ्फुसीय रोग (सीओपीडी) को साथ। उथले वा ढिलो सास फेर्ने, बान्ता गर्ने वा असामान्य सासको आवाजको अनुभव गर्ने बिरामीहरूले चिकित्सकीय ध्यान लिनुपर्दछ किनकि यी श्वासप्रश्वासको चिन्ता, एक सम्भावित घातक अवस्था हो।
वरिष्ठ, बच्चाहरू, यकृत वा मिर्गौला समस्या, हृदय रोग, मधुमेह, र दौरा जस्ता केही निश्चित स्वास्थ्य शर्तका व्यक्तिहरूले साइड इफेक्टको फराकिलो दायरा विकास गर्ने जोखिम बढी हुन्छ।
वरिष्ठहरुमा, चक्कर आउने जोखिम बढेको छ, जसले झर्न सक्छ।
विगतमा gabapentin लाई एलर्जीको समस्या भएका व्यक्तिहरूले लिनु हुँदैन। बिरामीहरूले चिकित्सकीय सहयोग लिनु पर्छ यदि उनीहरूले गम्भीर एलर्जीको लक्षणहरू जस्तै पित्ती, अनुहार, ओठ, वा जिब्रोमा सूजन, वा अचानक कमजोरी, गोलमाल, मतली, वा बान्ता जस्ता लक्षणहरू अनुभव गरे।
मानिसहरूले नौंरोन्टिनले उनीहरूलाई कसरी असर गर्छ भनेर थाहा नभएसम्म भारी मेसिनरी ड्राइभ गर्न वा संचालन गर्नु हुँदैन।
न्यूरोन्टिन लिने जोखिम र फाइदाहरू र सबै AEDs सावधानीपूर्वक गर्भवती र स्तनपान गराउने बिरामीहरूको लागि विचार गर्न आवश्यक छ। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सूचीत गर्नुहोस् यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ, स्तनपान गराउँदै हुनुहुन्छ वा सोच्नुहुन्छ कि Neurontin लिनु अघि तपाईं गर्भवती हुन सक्नुहुन्छ।
न्युरोन्टिन एक एन्टी-एपिलेप्टिक औषधि (AED) हो, जसलाई एन्टिकोनभल्सेन्ट पनि भनिन्छ। यसले शरीरमा रसायन र नसालाई असर गर्दछ र दौराको समयमा न्यूरन्सको अत्यधिक द्रुत फायरिंगलाई दबाउँछ। न्युरोन्टिन अन्य सामान्यतया प्रयोग हुने एन्टिपाइलप्टिक ड्रग्ससँग संयोजनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ Gralise ।
गम्भीर साइड इफेक्टको जोखिम, जस्तै उथले सास र गम्भिर निन्द्रा, यो औषधी लिईएको खण्डमा बढ्न सक्छ अन्य उत्पादनहरू जसले तन्द्रा वा सास फेर्न समस्या उत्पन्न गर्दछ। यससँग न्युरोन्टिन जोड्नुहोस्:
एन्टीडिप्रेसन्ट्स र एनिसियोलिटिक्स , bupropion सहित
Antiemetics , metoclopramide सहित
एन्टीहिस्टामाइन्स, शामकहरू, वा अरू केही चीज जुन तपाईंलाई निन्द्रा बनाउँदछ
मदिरा र गाँजा, जसले सीएनएस र श्वासप्रश्वास उदासीनता र साइकोमोटर कमजोरीको जोखिम बढाउन सक्छ
CNS Depressants -यस अनुसार खाद्य र औषधि प्रशासन , जो मानिस श्वासप्रणाली जोखिम कारक छन् सास फेर्न समस्या हुन सक्छ जब न्यूरोन्टिन लिएर CNS डिप्रेसनन्टहरूसँग लिन्छन्
इम्युनोसप्रेसन्ट्स , मुरमोनाब-सीडी3सहित
बहु स्क्लेरोसिस एजेन्टहरू , dalfampridine र amifampridine सहित
ओपिओइड औषधिहरू जस्तै, हाइड्रोकोडोनले श्वासप्रश्वासको उदासीनताको जोखिम बढाउन सक्छ
एल्युमिनियम वा म्याग्नेशियम युक्त एन्ट्यासीड्सले यस औषधिको अवशोषणमा हस्तक्षेप गर्न सक्दछ। तसर्थ, यदि तपाइँ एन्ट्यासिड पनि लिइरहनुभएको छ भने, एन्टासिड लिने कम्तिमा दुई घण्टा पछि गाबापेंटिन लिन उत्तम हुन्छ।
न्यूरोन्टिन साइड इफेक्टबाट कसरी बच्ने
१. निर्धारित अनुसार न्युरोन्टिन लिनुहोस्
तपाइँको प्रिस्क्रिप्शन लेबलमा सबै दिशा निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। यो औषधि ठूलो वा सानो मात्रामा वा सिफारिश गरिएको भन्दा लामोको लागि नखोज्नुहोस्। न्युरोन्टिन क्याप्सूल, ट्याब्लेट, विस्तारित-रिलीज ट्याब्लेट, र मौखिक समाधानको रूपमा उपलब्ध छन्। यो खानाले वा खाना बिना मुखबाट लिन सकिन्छ।
१२ बर्ष र अधिक उमेरका बिरामीहरूको लागि, सुरू खुराक 300०० मिलीग्राम दिनमा तीन पटक हो, र मर्मतको खुराक सामान्यतया दिनमा 300०० देखि mg०० मिग्रि तीन पटक हुन्छ। उपचारको पहिलो केही दिनहरूमा, तपाइँको डाक्टरले बिस्तारै तपाइँको खुराक बढाउन सक्छ ताकि तपाइँको शरीरले औषधिमा समायोजन गर्न सक्छ। सामान्यतया, वृद्ध बिरामीहरूको लागि डोज चयन सावधान हुनुपर्दछ, सामान्यतया खुराक दायराको कम अन्त्यबाट सुरू हुन्छ। 12 भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूको लागि खुराक तौलमा आधारित छ।
सम्बन्धित: Gabapentin खुराक हेर्नुहोस्
खुराक बीचको समय १२ घण्टा भन्दा बढी हुनु हुँदैन। सकेसम्म छिटो डोज लिनुहोस्। छुटेको खुराकको लागि अतिरिक्त औषधी नलगाउनुहोस्। यदि तपाईलाई मिर्गी छ भने, १२ घण्टा भन्दा बढि खुराकका बीचमा जान नदिनुहोस्।
२. तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग तपाईंको पूर्ण चिकित्सा ईतिहासको बारेमा छलफल गर्नुहोस्
तपाईले लिइरहनु भएको कुनै पनि औषधिको डाक्टरलाई भन्नुहोस्, प्रिस्क्रिप्सन र ओभर-द-काउन्टर ड्रग्स, भिटामिन, र हर्बल सप्लीमेन्ट सहित। उनीहरूलाई थाहा दिनुहोस् यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ वा स्तनपान गराउँदै हुनुहुन्छ। तपाईंको प्रदायकलाई बताउनुहोस् यदि तपाईंसँग मिर्गौला वा फोक्सो रोगको इतिहास छ। यो डिप्रेसन वा मानसिक स्वास्थ्य मुद्दाहरूको बारेमा छलफल गर्न पनि महत्त्वपूर्ण छ र यदि तपाईंले आत्महत्या गर्ने विचार पनि अनुभव गर्नुभएको छ, किनकि न्यूरोन्टिनले यी विचारहरूलाई बढाउन सक्दछ।
Mon. प्रभावहरू मोनिटर गर्नुहोस्
न्युरोन्टिनले चक्कर र थकान उत्पन्न गर्न सक्दछ। तपाइँ प्रदायकलाई बताउनुहोस् यदि तपाइँ निद्रा लाग्ने अरू केहि प्रयोग गर्नुहुन्छ, जस्तै एलर्जी औषधि, मादक पदार्थको दुखाइ औषधि, र रक्सी। गाबापेंटिनको सिफारिश गरिएको खुराक भन्दा बढि प्रयोग नगर्नुहोस्, र मानसिक सतर्कता चाहिने गतिविधिहरू जस्तै ड्राइभि। वा खतरनाक मेसिनरी अपरेटिंगलाई बेवास्ता गर्नुहोस् जबसम्म तपाईंलाई थाहा हुँदैन कि औषधीले तपाईंलाई कसरी असर गर्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि धेरै आराम पाउनुहोस् र नियमित निद्रा तालिकामा टाँसिनुहोस्।
Alcohol. मदिरा नलगाउनुहोस्
मदिरा र एन्टिकोनवल्सेन्ट्स दुबै मस्तिष्क गतिविधि र सुन्द्री, चक्कर आउँछ, र ध्यान केन्द्रित गर्न गाह्रो हुन सक्छ। यी सँगै लिनाले यी प्रभावहरू बिगार्न सक्छ, तपाईं बिरामी सोचाइको लागि सम्भाव्यताको साथ अधिक निन्द्रा र चक्कर आउँछ। अत्यधिक रक्सीको प्रयोग वा मदिरा फिर्ताको साथ दौरा गर्ने खतरा पनि छ। त्यसकारण, न्युरोन्टिन लिनुहुँदा तपाईले रक्सी खानु हुँदैन। यदि तपाईलाई कुनै प्रश्न वा सरोकार छ भने हेल्थकेयर प्रोफेशनलसँग कुरा गर्नुहोस्।
fexofenadine को ब्रान्ड नाम के हो?
मेलाटोनिन को5मिलीग्राम धेरै छ
के म बीमा बिना डाक्टर जान सक्छु?
किन तपाइँ फ्लू शट प्राप्त गर्नुहुन्न
म मधुमेह बिना किन कम रक्त शर्करा छ?